किन बस्दैछ माअाेवादी केन्द्रको हेडक्वाटर बैठक ! - Everest Dainik - News from Nepal
किन बस्दैछ माअाेवादी केन्द्रको हेडक्वाटर बैठक !
काठमाडौं, चैत २४ । नेकपा माओवादी केन्द्रको कार्यालय हेडक्वाटर बैठक बस्ने भएको छ । आज दिउँसो ३ बजे हेडक्वाटर बैठक बोलाएको छ ।
बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा अपरान्ह ३ बजे बोलाइएको बैठकमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाको समिक्षा हुने बताइएको छ ।
स्थानीय चुनावमा पार्टीको सहभागिता, मधेसी मोर्चालाई चुनावमा सहभागि गराउन पार्टीले खेल्ने भूमिका बारेमा छलफल गर्नको लागि पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले हेडक्वाटर बैठक डाकेका हुन् । बैठकमा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणको समीक्षा हुने नेताहरुले बताएका छन् ।
स्थानीय निर्वाचनमा पार्टीको सहभागितामा लगायतका एजेण्डा बैठकका लागि तय गरिएको छ ।
स्थानीय निर्वाचनमा महानगरपालिका र उपमहानगर पालिकाको उम्मेदवार हेडक्वाटरले तोक्ने र बाँकी तहमा जिल्लाले टुङ्गो लगाउने बिषयमा पार्टीले निर्णय गर्ने तयारी भएको नेताहरुले जानकारी दिए ।